करेला, मेथी र अदुवा लगायत यी ५ उपाय जसले डायबिटीज नियन्त्रण गर्न मद्दतगार हुन्छ, जानी राखौँ – Etajakhabar
मंगलबार, बैशाख ११, २०७५ | Tuesday, Apr 24, 2018
करेला, मेथी र अदुवा लगायत यी ५ उपाय जसले डायबिटीज नियन्त्रण गर्न मद्दतगार हुन्छ, जानी राखौँ
ताजा खबर:- डायबिटीज यस्तो लाइफस्टाइल डिसीज हो, जसमा खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्दछ । यसले तपाईलाई जीवनभरि प्रभावित गर्छ । डायबिटीज दुई किसिमको हुन्छ । टाइप १ डायबिटीजमा शरीरमा इन्सुलिनको निर्माण हुँदैन जबकी टाइप २ डायबिटीजमा इन्सुलिनको निर्माण हुन्छ तर निकै कम मात्रामा हुन्छ । यसलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न सकिँदैन तर केही उपायहरूको सहायताले यसमा नियन्त्रण राख्ने कोशिश गरिन्छ । आज हामी तपाईलाई ५ यस्ता आयुर्वेदिक उपायको बारेमा बताउँदैछौँ, जसले डायबिटीजलाई प्राकृतिक रूपले नियन्त्रण गर्न मद्दतगार हुन्छ ।
करेला- करेला ब्लड शुगरलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । उचित परिणामको लागि हरेक दिन ३-६ चम्मच करेलाको जूसको सेवन गर्नुपर्दछ । फिलिपिन्सको एक अध्ययनमा डायबिटीजले ग्रसित महिला र पुरुषलाई क्याप्सुलको रूपमा करेलाको सेवन गर्नको लागि दिइएको थियो । तीन महिना पछी करेलाको क्याप्सुलको सेवन गर्ने मानिसहरूमा ती मानिसको तुलनामा बढी मात्रामा ब्लड शुगरमा कमी देखियो, जो डायबिटीजको लागि प्रायोगिक औषधि लिइरहेका थिए ।
मेथी- हरेक दिन ५-३० ग्राम मेथी भोजनको साथ सेवन गर्दा ब्लड शुगरको स्तर कम हुन्छ । मेथीमा फाइबरको प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । यसको साथै यसमा एमिनो एसिड पनि प्रयाप्त मात्रामा पाईन्छ । मेथीको सेवनले शरीरमा इन्सुलिन संवेदनशीलता बढ्छ र हाई कोलेस्ट्रोलमा कमी आउँछ ।
अजवाइनको पात- अजवाइनको पात ब्लड शुगर स्तर कम गर्न अत्यन्त मद्दतगार हुन्छ ।
अदुवा- अदुवा एन्टी-डायबिटीक गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले ब्लड शुगरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दतगार हुन्छ । इन्सुलिन सेंसिटिभिटी र कोलेस्ट्रोल स्तरलाई राम्रो बनाई राख्न अदुवा निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसको लागि हरेक दिन कम्तीमा २-३ कप अदुवाको चिया पिउनु लाभकारी हुन्छ । यसको साथै भोजनको साथमा पनि यसको सेवन गर्न सकिन्छ ।
करीको पात- २००७ मा भएको एक अध्ययनमा भनिएको छ कि करीको पात डायबिटीजको प्रचण्डतालाई कमी गर्ने काम गर्छ । यसको लागि तपाई हरेक दिन बिहान खाली पेट करीको पात चपाउनुहोस् । तपाई करीको पातको पाउडर बनाई यसलाई आफ्नो सूप्स र सलादमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २६, २०७४ समय: १८:१२:४८
ब्लड प्रेसर बढ्यो ? ज्यानै जान सक्छ । घरमै बसेर प्रेसर घटाउन डा. त्रिपाठीका ५ सुझाव
अब काठमाडौँ पोखरामा मात्र होइन सर्प दंशको उपचार गाउँ गाउँमा हुँदैछ
संभोग एक अनौठो कला, जसका बारेमा जान्नुहोस् यि आधा दर्जन रोचक तथ्य, जुन तपाईलाई पनि लाभदायक बन्न सक्छन्
बन्दैछन् कडा भन्दा कडा नियम, नबुझ्ने प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने डाक्टरलाई कारबाही
सपनामा सम्भोगको अर्थ…
बढ्दै स्वरयन्त्रको क्यान्सर, धुम्रपान र मद्यपान मुख्य कारण
यी लक्षण देखिएमा तपाईलाई पिनास हुन्छ र यसरी १ दिनमै निको पार्न सकिन्छ पिनासलाई
भारतमा बर्डफ्लु देखापरेपछि नेपाल सरकारले आयातमा रोक लगाएपनि भित्रियो, रोग लागेका कुखुरा र अण्डा !
सुनकाण्डमा तानिए पुर्व आइजीपी प्रकाश अर्याल, सई बालकृष्ण सञ्जेल प्रहरी नियन्त्रणमा
चितवनमा नेपाली आर्मीकी श्रीमती कल्पनालाई ट्राफिक प्रहरीका नायब निरीक्षक रामचन्द्र खनियाँले एसिड प्रहार गरे, यस्तो छ अहिलेको अवस्था
हट जियालाई साथमा लिएर फेरी सिक्किम हानिए ह्याण्डसम भूवन
श्रीमतीसँग मिलेर यस्तो गम्भिर अपराध गरेका रहेछन् बलिउड चर्चित अभिनेता राजपाल यादवले, अदालतले सुनायो जेल सजाय
अमेरिकाको डिभीवाला ज्वाई खोज्दा !
युटुवहरुमा भाइरल बनिरहेका झापा दमकका बाल गायक अशोक दर्जी को पहिलो "गीत मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिना को मन " गित रेकर्डिङ भयो, यस्तो बन्यो गित (भिडियोसहित)
सडक दुर्घटनमा परी सांसदको परिवारसहित आठको मृत्यु
कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उनका स्वकीय सचिवले रक्सीले मातेर स्थानीय वीरबहादुर थापालाई आँखा नै बन्द हुने गरि कुटपिट गरे
नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलका तत्कालिन सभापति गुण्डा नाइके रिगल ढकाललाई अदालतले ‘सर्वश्वसहित जन्मकैद’को फैसला सुनायो !
ससुरालीबाट घर फर्कंदा टिप्परको ठक्करले श्रीमान श्रीमतीको दुखद मृत्यु, घर सम्म पुग्न नि पाएनन् बाटैमा सधैका लागि अस्ताए
चर्चित गायक सिडी बिजय अधिकारीको गीतमा हट अनितासँग यि ह्याण्डसमले गरे रोमान्स
चिनिको मूल्य ह्वात्तै आकाशिएपछि ब्यापारीले चाले यस्तो कदम
औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालयकै अधिकृत ५० हजार घुससहित पक्राउ
आखिर कसले लगायो चर्चित गायक राजनराजलाई यस्तो गम्भिर आरोप ?
बलिउड चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई समेत यत्रो वर्ष मिडियामा प्रतिबन्ध, काँग्रेसले गरेको थियो त्यो भूल